Carl-Henry-Gray-Suit-ary-ChampaigneIzaho dia nanomboka "raharaham-barotra" voalohany fony aho 12 taona - nandefa gazety vao maraina ary tamin'ny hariva hariva 7 isan-kerinandro, isaky ny tsy mifanditra ny zazalahy dia haka fotoana hanaovana 2 na 3 fihodinana taratasy hafa!
Ny "fandraharahako" faharoa dia nanomboka manodidina ny 13 taona dia nanamboatra sy nivarotra moto taloha, lambam-bidy ary scooter ho an'ny zazalahy hafa izay andehanantsika amin'ny tany an-tany mba hahafinaritra.
Niditra tao amin'ny tafika miaramila ihany koa aho izay nandany ny takarivan'ny 2 isan-kerinandro sy ny faran'ny herinandro maro; Nianatra ny momba ny miaramila, ny diabe, ny fitaovam-piadiana, ny fitsipi-pifehezana ary ny fomba hanolorana ny tenantsika araka ny tokony ho izy. Izany dia mitarika amin'ny tafika tsy tapaka rehefa miala an-tsekoly.
Taorian'ny nialako ny tafika dia nanana asa aho, izay ankoatry ny zavatra hafa, amidy ny hifi sy fitaovana stereo, izany hoe rehefa lasa liana amin'ny mozika aho ary nitarika ny asako voalohany ho DJ. Tao anatin'ny 4 volana tamin'io fotoana voalohany nanaovan'ny DJing io dia lasa DJ miasa samirery aho tamin'ny 1st Jolay 1978 ho an'ny Coral Group ao amin'ny disko vaovao any an-tanàna, 3 volana vitsy taorian'izay dia nanomboka ny orinasako faharoa nanofa ny findramam-pandeha finday sy fitaovana ary feo mitantana ny masoivoho DJ ho an'ny hotely eo an-toerana.
Izany no fomba natomboko nanomboka ary nanomboka teo aho dia nandray anjara tamin'ny indostria samy hafa 39 farafahakeliny.
Nandritra ny taona maro izay aho dia nanontany be aho "Hey Carl, inona no ataonao fivelomana?" Niova ny valin-teniko rehefa nandeha ny fotoana! Ity dia ampahany satria mbola tsy nisy valiny tsotra ary mety ho ela koa vao manome valiny marina (Tsindrio eto raha hijery ilay video manazava ny zava-drehetra). Nentaniko foana aho mba hananako tena, hahatakatra sy hifehezana ny zavatra rehetra ilaina handrosoana ny zavatra tsy miankina amin'ny hafa ho an'ny fahombiazako (na ny tsy fahombiazako).
Rehefa niantomboka aho, tamin'ny 1st Jolay 1978, dia tena vonona tanteraka amin'ny fiainana ara-barotra aho, manana fiara fotsiny aho hanana fiainana tsaratsara kokoa sy araka izay azo atao araka izay azo atao - mbola tsy nitory tamin'ny asa manontolo andro aho.
Ny fahalalahana dia misy vidiny tena izy, na dia tsy manana fahatokisana momba ny zavatra rehetra aza ianao, afaka mamorona ny famoronana fahatokian-tena raha toa ianao ka manao zavatra lava dia mahatonga anao ho ampy vola ahazoana na mampiroborobo - saingy raha efa niaina imbetsaka aho, na inona na inona anananao azo esorina na potika ao anatin'ny fotoana fohy. Tsy voatery ho fahavalon'ny fahavalo na fahavalo efa fantatra. Mety ho hetsika nasionaly na iraisam-pirenena izany, mpanao politika manao tombantombana ratsy momba ny fomba hampandehanana ny firenena sy vintana ratsy tsotra. Mety ho tratry ny fandrika mety hatraiza hatraiza, mila miasa ireo zavatra manan-danja izay mety hitranga aminao ianao ary manana drafitra mihemotra, ohatra!
Ny ankamaroan'ny olona dia nahita ampahany kely amin'ny asako ihany, noho izany dia mirisika izy ireo hamporisika ahy "hifantoka" na "mifikitra amin'ny zavatra tokana", fantatro fa avy amin'ny fomba fijeriny voafetra, ny tsy fahalalany ny orinasa feno ary ny fahatakarana ny fahatakarana ny fizotran-kevitra noraisiko dia mitombina tsara ho azy ireo - saingy fantatro ny fisafidianana, ny fotoana sy ny toe-javatra maro mety hitranga amin'ny sehatry ny asa aman-draharaha isan-karazany; Manana mazava lalindalina kokoa aho amin'ny fampivelarana ny foto-kevitry ny orinasa.
Betsaka ny valiny mahomby azo avy amin'ny fanoherana famonoan-tena tanteraka, tsy mety amiko izany rehetra izany fa mila manao zavatra tsara kokoa ihany aho noho ny tsy mety hahombiazako. Marina fa ny hetsika dia mety hiteraka olana, olana manome anao traikefa ary ny traikefa dia mitondra mankany amin'ny fahombiazana (raha mihaino azy ianao).
Tsy lalana tsipika mankany amin'ny fahombiazana ary na ankehitriny aza dia tsy ekeko fa nahatratra ny fara tampony indrindra amin'ny tanjoko aho, eo amin'ny lafiny tombony na tombony amin'ny ankapobeny - mihevitra aho fa amin'ny andro farany eto ambonin'ny tany dia hanana "Just asa iray hafa tokony hatao ”.
Tena sahirana tanteraka aho tamin'ny nanombohako orinasa satria tsy nanadino ny taona 12 voalohany niainako tamin'ny fahazazana fahazazana, izay misy olona mianatra fahaizana mifanerasera, mifanerasera amin'ny hafa sns. Izany dia satria niaina fiainana somary mitokana any amin'ny faritra avaratr'i Afrika aho. 19Km ivelan'ny tanànan'ny seranan-tsambo kely - rehefa niverina tany Angletera aho tamin'ny 12 taona dia fotoana mampisavorovoro izany izay nahatonga ahy hazoto hahafantatra momba ny fomba fiainana sy ny fiainana. Nahatonga ahy hianatra haingana kokoa noho ny tarika namako izay nolaviko haingana, farafaharatsiny amin'ny fepetra momba ny tenako satria izy ireo tsy liana tamin'ny zavatra izay ahy sy ny visa-versa!
Hatramin'ny 1972 dia nianatra boky momba ny fiainana sy orinasa & # xNUMX aho, hatramin'ny nisian'ny internet tao 100 dia mbola mpikaroka nanolo-tsaina ny lalan'izao tontolo izao aho ary manam-pahaizana amin'ny fananganana orinasa an-tserasera. Naniry foana ny hizara ny zavatra hitako tamin'ny olona mila fanampiana aho satria fantatro avy amin'ny zavatra niainan'ny tanana voalohany fa manirery sy sarotra ny manandrana mianatra amin'ny alàlan'ny fitsapana-diso ary koa manandrana miasa fotsiny ny zava-drehetra irery dia mitaky fotoana be ary mety manimba fanahy.
"Te hanampy olona maro araka izay azo atao aho hahatongavana amin'ny masonkareniny feno"
Heveriko fa ny any ivelany dia niaina fiainana antonony avo lenta hatramin'ny taona 20 farany teo aho, ary be fisaorana betsaka aho - efa nipetraka tao Monaco sy Cote d'Azur aho hatramin'ny taona 2000 ary manana millionaire maro aho ary na dia sakaiza an'arivony tapitrisa aza. Manana fifandraisana amin'i Royalty amin'ny alàlan'ny vondrona sy fikambanana manohana ahy ihany koa aho - miampy fifandraisana an-jatony maro miaraka amina mpiasa miasa tsy tapaka izay manome serivisy andavanandro izay ilaintsika hanatanterahana ny tontolontsika. sarobidy.
"Mino ny herin'ny fihomehezana sy ny fananana aho
tena faly sy malalaka araka izay tratra. "
Ny valin'ny asa aman-draharahako hatreto dia "Carl Henry Global" izay ametrahako ny hetsika ataoko eo ambany lohatenin'ny 5; Fitantanam-bola, fananan-tany (fananana), Internet (marketing amin'ny Internet), orinasa sy fiainana manokana & fiainana - Mampiasa ireo lohateny ireo aho mba handaminana ny fiainako sy ny fiainako manokana. Hitako fa mahasoa ny manana an'ireny "boaty" ireny mba hampidirana ny eritreritro sy ny fikasako rehetra. Vakio bebe kokoa ny pejy "About Us" ...,
Hatramin'ny 1998 dia nampiasa ny internet aho araka izay azo atao mba hampandehanana ny asa aman-draharahako mba hampihenana ny haben'ny rafitry ny orinasako. Ity dia rehefa tonga niaraka tamin'ny "CAD-Q" (Communication, Automation, Dissemination and Qualification) ny tontolon'ny Internet dia fomba tsara hanamaivana ny asa ivelan'ny Internet.
Ny tanjoko amin'i Carl Henry Global dia ny hamorona konglomeritra an-tserasera izay afaka manohana sy mitantana orinasa marobe ary manohana ny indostrian'ny orinasa amin'ny alàlan'ny fampitaovana ireo fitaovana sy rindrambaiko antserasera. Reko ity modely antsoina hoe "integrational vertical" ity, fantatro fotsiny fa tsy tiako ny miankina amin'ny antoko 3rd amin'ny fivoarako.
Nanangana tranokala marobe sy be dia be ihany koa izahay! Ny fahasamihafana lehibe eo amintsika sy ny "mpanaingo tranokala" mahazatra dia ny ahalalantsika ireo karazan'orinasa marobe tsy miankina ary mamolavola rafitra momba ny raharaham-barotra an-tserasera izay hiasa ao amin'ny tontolo tena izy, ny famoronana bokikely mahafinaritra an-tserasera dia tsy mahaliana antsika lavitra amin'ny fitokana - izahay mila ny "Atra-fandraharahana An-tserasera" mba hanao asa sy hanampy anao mahazo vola an-tserasera!
Miaraha miasa aminay !!
Raha ny fanazavana dia miasa ny orinasa feno izahay ary mitantana ny tetikasanay manokana, fa mandray koa ireo fifandraisana maro izahay; ity dia mety ho mpiara-miasa na mpiofana, mpanazatra, mpanjifa, mpiara-miasa, Joint Venture na mpiantoka.